IPL 2020, CSK vs DC : दिल्ली संग को हारपछि धोनीले गरे हार्नु पछाडीको ठुलो खुलासा ? » Onlycricnepal
IPL 2020, राजस्थान पछि दिल्लीको हात बाट चेन्नई को लगातार दोस्रो हार मिल्यो । यस प्रकार दोस्रो हार पछि धोनीले भने, “यो खेल हाम्रो लागि राम्रो थिएन। ब्याट्सम्यानहरूले गरेको प्रदर्शनबाट यो केही निराशाजनक छ। त्यहाँ एकदम ढिलो सुरूवात भयो, जसको कारण रन रेट लगातार बढ्यो र हामीमा दबाब बढ्यो। हामीले जाँच गर्नु पर्छ कि समस्या कता जाँदैछ। हामी राम्रोसँग फर्कनु पर्छ र राम्रो संयोजन देख्नुपर्नेछ। ”
त्यहि बलिङ्ग को सम्बन्धमा धोनीले अझै भने, “हामीले आफ्नो लाइन, लेंथ र गति हेर्नुपर्नेछ। मलाई लाग्छ स्पिन बलरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे। हामी राम्रो बलिङ्ग गर्दै थियौं तर उता केही बाउंड्रीहरु पनि दिइरहेका थियौं। ”
त्यहि दुबै को मैदानमा शुरु बाटा त्याहा को कम बत्तीहरू भएको कारण क्याचहरू छुट्दै आएको छ। यस खेलमा धेरै क्याचहरू पनि छूटे। जसलाई धोनीले भने, “सबै खेलाडी यसप्रकार को बत्तीहरूमा खेल्ने बानि हुँदैनन्।” हुनसक्छ जब बल माथि जान्छ, तब बत्तीहरू बाटोमा आउँदछन्। त्यसकारण तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ क्याच छुट्नुमा यो पनि एक कारण हुन सक्छ। ”
खेलको बारेमा कुरा गर्दा यस खेलमा सीएसके कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले टस जितेर दिल्लीलाई पहिले ब्याटिङ्ग गर्न आमन्त्रित गरेका थिए। पहिले ब्याटिङ्ग गर्न अगाडि आएको श्रेयस अय्यरको कप्तान रहेको दिल्ली टोली ले निर्धारिक २० ओवर मा तीन विकेटको क्षतिमा १७५ रन बनाए जुन उनीहरुले डिफेन्ड गर्न सफल भए । दिल्ली द्वारा दिइएको १७६ रनको लक्ष्यलाई पछ्याउँदै सीएसकेको टोली लगातार अन्तरालमा विकेट गुमाउँदै थियो। सीएसके टोली निर्धारित २० ओभरमा १३१ रन बनाउन सफल भयो भने ७ विकेट गुमादै दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ४४ रनले पराजित भएको हो।
चेन्नाइमाथी दिल्लिको फराकिलो जित !
दिल्लीविरुद्ध मलिंगालाई पछि पार्दै चावलाले बनाए नयाँ रेकर्ड
अनुष्काले सुनिल गावस्करको टिप्पणीमा दिइन् कडा जवाफ, हेर्नुहोस् कुन अभिनेत्रीले के लेखे?
पञ्जाबले टस जित्यो, प्लेइङ–११ मा ४ खेलाडी परिवर्तन
८ बैशाख २०७८, बुधबार १५:३४
पृथ्वीले बनाए आक्रामक अर्धशतक, गरे चौकाको वर्षा
१६ बैशाख २०७८, बिहीबार २२:१७
आइपीएल: सन्दीपले पञ्जावविरुद्धको खेल गुमाउने सक्ने, यस्तो छ कारण
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०७:४८
बैंग्लोरले दियो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य, दिल्लीका बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शन
१७ कार्तिक २०७७, सोमबार २१:३०
Pingback: IPL 2020 : अम्बाती रायुडू कहिले मैदानमा उत्रिन्छन ? धोनीले गरे खुलासा ! » Onlycricnepal